कहाँ कति बजे हुँदैछ देशैभर प्रर्दशन निर्मलाका निम्ति ? - Everest Dainik - News from Nepal
कहाँ कति बजे हुँदैछ देशैभर प्रर्दशन निर्मलाका निम्ति ?
काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्याकाे गरिएकाे कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशाेरी निर्मला पन्तकाे निम्ति न्याय माग्दै शनिबार दिउँसाे देशैभर प्रदर्शन हुँदैछ ।
‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ #JusticeForNirmala#RageAgainstRape अभियान अन्तर्गत स्वतःस्फूर्तरूपमा देशभर प्रदर्शन हुन लागेको हो ।
अभियानअन्तर्गत काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दिउँसो १ बजे कार्यक्रम राखिएको छ।
यसैगरी विराटनगर, धरान, जनकपुरलगायत देशका मुख्य सहरमा दिउँसो तथा साँझ प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ।
पन्तको बलात्कार तथा हत्याका दोषीलाई अझै पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै दबाब दिन देशभर प्रदर्शनको कार्यक्रम राखिएको हो।
अमेरिकाबाट बाबुरामको समर्थन
हाल अमेरिकामा रहेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त अभियानमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्।
उनले आफ्नो फेसबुकवालमा लेख्दै भनेका छन्– अहिले विदेशमा रहेपनि मेरो आत्मा स्वदेशमा छ र निर्मला लगायतका बलात्कृत महिला र बालिकाहरूका निम्ति न्यायको अभियानमा पूर्ण साथ छ । न्यायको अन्तिम सम्पादन जागरूक जनताले गर्छन्।
गत साउन १० गते साथीको घरमा कापीकिताब लिएर गएकी निर्मला पन्त भोलिपल्ट अर्थात् साउन ११ गते नजिकैको उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि अझै अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन।
निर्मलाका बुबा यज्ञराज र आमा दुर्गादेवी न्याय माग्दै कञ्चनपुरबाट काठमाडौं आएका छन्। शुक्रबार संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हत्याका दोषी छिट्टै पक्राउ पर्ने बताएका छन् ।
कुन कुन ठाउँमा कति बजे देशैभर प्रर्दशन-